2way 4way Solar Cable Clip Stainless Simbi Wire Clamp yeSolar Kuisa Kuisirwa
2way Solar Cable Clip SUS Panel Clamp inoshandiswa yezuva waya waya manejimendi, inonziwo simbi isina waya tambo clip, solar panel clip.Iyo inogona kubatsira kugadzirisa tambo yezuva zvakanaka musolar paneeli, kuitira kuchengetedza tambo yezuva kubva pakudonha pasi nekukuvara.
MC4 Connector Dust Proof Cover Sealing Cap inoshandiswa kweMM4 solar connector murume nemukadzi, kuchengetedza MC4 plugs nemaadapter kubva kuguruva nemvura muzuva inverter nema solar system.
10A 20A 30A 12V 24V Akangwara PWM Solar Charge Controller
10A 20A 30A 12V 24V Akangwara PWM Solar Charge Anodzora chishandiso chinodzora chinoshandiswa musolar simba rekugadzira system, iyo inodzora iyo yakawanda-chiteshi rezuva maseru maseru kuripisa bhatiri uye bhatiri kupa simba mutoro wezuva inverter. controller ndiyo yepakati yekudzora chikamu cheiyo yose photovoltaic magetsi magetsi system.
2P 4P 30mA 100mA 300mA 16A 32A 40A 63A ELCB RCCB RCD Inosara Yazvino Dunhu Rinopwanya
RCB RCCB ndeyeResidual Yazvino Circuit Breaker, ELCB ndeye Earth Leakage Circuit Breaker, iyo inoshanda kumatunhu emagetsi ane yakatemwa magetsi 230 / 400V AC, frequency 50 / 60Hz uye yakatemwa zvazvino kubva 16Amp kusvika 125Amp.
RCCB ELCB RCD inopa isina kunanga kudzivirirwa kumuviri weanoshanda pasi pechimiro chakadai chekuti zvikamu zviri pachena zviri pachena ngazvibatanidzwe padanda rakakodzera revhu. RCCB inopawo chengetedzo kubva kunjodzi yemoto inokonzerwa nepasi kukanganisa kwazvino nekuda kwekutadza kwekushanda kweanopfuura-azvino dziviriro mudziyo.
1000V Solar Kunze kwesimba Kudzivirirwa Mudziyo Kuvhiya Arrester DC SPD
1000V Solar Kunze kwesimba Kudzivirirwa Mudziyo Surge Arrester DC SPD (muchidimbu DC SPD, alias, surge suppressor, surge arrester) inokodzera TN-S, TN-CS, TT, IT nezvimwewo, iyo magetsi magetsi system ye AC 50 / 60Hz. Kana iyo SPD ikakundikana mukuputsika kweanopisa kupisa kana pamusoro-pari zvino, kutadza kuburitswa kuchabatsira michina yemagetsi yakaparadzaniswa neyemagetsi system uye ichipa chiratidzo chechiratidzo, zvakare inogona kutsiviwa module kana iine magetsi emagetsi muSolar PV Systems.
AC Miniature Dunhu Rinotyora 63 Amp 1P 2P 3P 4P AC MCB
AC Miniature Circuit Breaker 63 Amp 3 Phase MCB yakagadzirirwa kupa kuchengetedzwa kwakanyanya mukati memidziyo kana midziyo yemagetsi, uko dunhu redziviriro redunhu ratove dziviriro kana risingadiwe. Midziyo yakagadzirirwa yakananga yazvino (AC) yekudzora wedunhu kunyorera muSolar Power Systems.